Yakanakisa Kuita Runyorwa maapplication eiyo Linux desktop | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri mumwe weavo vanofarira kuchengeta odha yezuva nezuva, basa kana kudzidza uye usakanganwa kuita chero homuweki kana nguva dzakatarwa, ipapo uchave unofarira kuziva zvimwe zvezvakanakisa. Kuita Rondedzero maapplication ayo anowanikwa natively kune iyo Linux desktop.
Aya maapplication anga achivandudza zvakanyanya, uye haachave akareruka ajenda kana rondedzero nemabasa iwe aunofanirwa kuita. Ivo vanga vachiwedzera mabasa ekarenda, nguva, notisi, uye kunyange zvimwe zvekushandisa kuti zvikubatsire kuzadzisa zvinangwa zvako uye shanda zvakanyanya, uchivandudza kugadzirwa.
Zvimwe zveZvokuita Runyorwa maapplication inokurudzirwa kune iyo GNU / Linux desktop (mamwe aripo muwebhu vhezheni uye nharembozha) ndeaya:
Joplin: ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi Yekuita Rondedzero app iyo inogona kushanda isingaite. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuishandisa sewebhu, mune terminal, uye pane nhare mbozha, uchienderana mune ese iwo. Iyo zvakare inobvumira geolocation, kuwedzera mafaera, inotsigira Enex mafaera (Evernote) uye plugins anogona kuiswa.
Todoist: haina mahara, asi ndeye freemium. Nayo unogona kuronga mabasa evashandisi vakasiyana, maneja kubatanidzwa kweboka, mashandiro ekuona kugadzirwa, mishumo yekufambira mberi, uye backup mumakore. Zvese kubva kuNice, yazvino uye shoma UI.
Planner: iri yakasimba kwazvo, yemahara uye yakavhurwa sosi app. Iyo ine yakapusa uye yazvino graphical interface kubva kwaunogona kuona zviitiko, kuronga zuva rako, kuronga mabasa muzvikamu, kuratidza zviratidzo zvekufambira mberi, kuronga zviyeuchidzo, nezvimwe. Uye zvakare, inoshanda isingaite uye ine yakasviba modhi.
Zenkit ToDo: imwe freemium vhezheni Yekuita Rondedzero yekuchengeta ako mabasa akarongeka, pamwe neako maapoindi, manotsi, zviitiko, wedzera manotsi, zvekutenga zvinyorwa, maturusi ebasa rekushandira pamwe, kugovera faira, nezvimwe
Everdo: iri yemahara multiplatform app senge GTD (Kuwana Zvinhu Zvakaitwa), inozivikanwa nzira yekuvandudza kugadzirwa. Iyo yakagadzirirwa kuve nyore kwazvo kushandisa uye inokutendera iwe kushandisa zvinyorwa, nzvimbo, mamiriro, mapurojekiti, kubata nguva yako, shanda isingaite, etc. Zvese zvinhu zvakakwanisa kubva pane yakanaka uye diki interface.
Zvese.txt: iri nyore runyorwa runyorwa kunyora ako mabasa. Iwe unongofanirwa kunyora uye kunyora zvaunoda kurangarira. Shanda nemapurojekiti, mamiriro, nguva dzakatarwa uye zvakakosha. Iyo yakavhurika sosi uye yemahara, uye yakakwana kune avo vari kutsvaga chimwe chinhu chakanyanya kukosha. Kana iwe uchida GUI, iwe unayo Todour, iyo inoshanda seinongedzo yeTodo.txt.
GNOME Kuti Uite Chinyorwa: ndicho chirongwa chakagadzirwa pasi peiyo GNOME chirongwa cheichi chinangwa. Iyo yakagadzirirwa kuve inonzwisisika uye ine simba, kuve nekukwanisa kutevedzera kufamba kwako, kuronga mabasa, kutsanangura nguva yavo, nguva dzekuzorora, nezvimwe.
Basa Kochi: Yemahara uye yakavhurwa sosi yekuita Rondedzero app inowanikwa kune akawanda mapuratifomu. Iyo iri nyore basa maneja nekwanisi yekuwedzera manotsi, kurongwa nemapoka, nezvimwe.
Kubudirira Kwakakura: Iyo inonakidza kwazvo Kuita Rondedzero app yevanogadzira, nekuti iyo yakagadzirirwa kusangana neGitLab, GitHub uye Jira. Nayo unogona kuronga, tevera mabasa, gadzira mashedhiyo, nezvimwe. Zvakare, remekedza zvakavanzika zvako, sezvo zvisingabatanidzi chero kunyoreswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Yakanakisa Kuita Runyorwa maapplication eiyo Linux desktop
Ndatenda, ndaisaziva zenkit sarudzo yakanaka.
Ndatenda, ini ndaisaziva zenkit, iri sarudzo yakanaka.
Ndatenda nerondedzero, nyatsoda Planner. Zvakare ndinofunga Stacks, WeekToDo uye Taskade zvinogona kunyorwa.
Green Software Foundation, hwaro hwakagadzirwa kuitira kuti ibudise mashoma emhepo kabhoni mukuvandudza software